Medellín Libre: Mashruuca bulshada si loo yareeyo farqiga u dhexeeya tikniyoolajiyadda | Laga soo bilaabo Linux
Medellín Libre: Mashruuca bulshada si loo yareeyo farqiga u dhexeeya tikniyoolajiyadda
@Jlcmux | | Noticias
Maanta waxaan u imid inaan waxyar kaaga sheego mashruuc la yiraahdo Medellin Bilaash ah. Asal ahaan waxay isku dayeysaa inay hirgeliso wax aan cusbooneysiin, oo lagu qabtay dalal badan magaalooyin badan oo adduunka ah.
Waa wax aan ka badneyn nooc weyn oo shabakad wireless ah Mesh (Ama mesh net) meelaha durugsan ee magaalada, oo ku wajahan bartamaheeda, sidaas darteedna lagu xirayo farqiga u dhexeeya tikniyoolajiyadda ee u dhexeeya labada dhinac, fududeynta isdhaafsiga macluumaadka.
Mid ka mid ah yoolalka Medellin Bilaash ah in bulshadu awood u leedahay inay taageerto noodhadhka (anteenooyinka), iyo inay maamuli karaan adeegyada lagu rakibay mesh wax walbana way maamuli karaan. Taasi waa sababta koorsooyinka isku xirka iyo barnaamijyada iyo aqoon isweydaarsiyada sidoo kale loo bixiyo.
Noocyada shabakadahaani waxay ku mahadsan yihiin wax la yiraahdo OpenWRT taas oo ah qalabka lagu isticmaalo router-ka. Dabcan, Mashruuc kasta oo Shabakad Mesh ah ayaa tifaftir ku sameeya Firmware u gaar ah oo markaa ku habboon baahidaada.
Ilaa hadda waxaan haynaa rakibaadda 2 nood waxaana horey u haynaa 3aad inaan rakibno. Adeegyada aan ka fulinayno shabakadda dhexdeeda waxaa ka mid ah:
XMMP Chat Server
Kuwa kale ...
Mashruucan waxaa lagu qabtay mahad bulshada Software Free ka yimid magaalada oo aan lahayn taageero dowladeed.
Bogga rasmiga ah: http://medellinlibre.co
Bogga Fan: Medellin Bilaash ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Medellín Libre: Mashruuca bulshada si loo yareeyo farqiga u dhexeeya tikniyoolajiyadda
Dadaal aad u fiican. Waxaan jeclaan lahaa in dalkaygu noo oggolaado inaan taas sameyno ... dabcan, waxaan jeclaan lahaa inaan helno ilo aan ku qabanno.
Kheyraadka waxaan kudhow nahay isku mid. Noodhadhka aan ka soo baxnay jeebkeena. Server-ka sidoo kale sifiican .. Waar waxaan u soconaa .. hehe
Haddii aan kari lahaa waan tagi lahaa oo waxaan ka caawin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha, serverka, dheelitirka culeyska ... iwm
Way fiicantahay inaad aragto qoraal ku saabsan magaalada aan ku noolahay 😀
Waxaan rajeynayaa markaa inaad ku soo biirto mashruuca haha ​​😀
Ugu dambayntii qof waddankayga ka yimid. Medellin maku fasaxay FLISOL?
Haa, waan ahayn. Xaqiiqdii, qaar kamid ah xubnaha Medellín Libre ayaa abaabulayaal ka ahaa Flisol.
Waxaan sidoo kale joogi doonnaa Barcamp 2013 iyo Campus Party. Sida James. Waxaan rajeynayaa inaad kubiirto mashruuca Juan Camilo.
Laakiin waxaan joogaa Bogota.
Medellín had iyo jeer wuxuu tusaale u yahay casriga, taasi waa sababta ay u tahay magaalada ugu wanaagsan dalkeenna.
Dhab ahaan, Bogotá (http://www.bogota-mesh.org/, kuwaas oo taageero ka haysta degmada) iyo xeebta (sidaan maqlay ... ma aqaano mashaariic gaar ah) durba waxaa jira waxyaabo qaabkan ah. Gudaha Medellín wali waxaan kujirnaa "xafaayad" arinta, laakiin muhiimada ayaa ah inay durba bilaabatay.
Waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah kordhinta noodhadhka, oo ka buuxi shabakada adeegyo waxtar leh (oo aan aad u faa iido badan… xD) si dadka isticmaala ay ugu xirnaadaan.
Taageerada degmadu runtii waa sababta oo ah ma doonayno xD. Xitaa weli kamaanaan eegin.
Diego Forigua dijo
Hambalyo, waxaan ahay Diego Forigua oo ka socda Bogota-Mesh http://www.bogota-mesh.org Waxaanan rabaa inaan caddeeyo in degmada ama shirkad gaar loo leeyahay ama shirkad dawladeed midna hadda na taageerin.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan liiskayaga boostada https://lists.riseup.net/www/subscribe/bogota-mesh
Yaa bogota-mesh runtii ah? http://wiki.bogota-mesh.org/doku.php?id=inicio:preguntas_frecuentes#de_quien_son_estas_redes
Jawaab Diego Forigua
Salaan Aan aragno haddii aan fahmay waxaani waa:
Ma LAN baa tuulo?
Fikraddu waa mid aad u wanaagsan sidaa darteed halkii ay dad badani ka kiraysan lahaayeen adeegga internetka ISP, ay isugu yimaadaan dhowr deris, kireystaan ​​hal khad oo aad u xoog badan isla markaana abuuro waxaad halkan ku dhajiso. Si kale haddii loo dhigo, LAN u dhexeeya deriska.
Dabcan, waa inaad sameysid qandaraas si mid kasta oo ka mid ah dhinacyada (deriska) ay u bixiyaan waxa u dhigma adeegga una falanqeeyaan cidda noqon doonta maamulka shabakadda iyo sida loo hirgelin doono.
Waa wax xiiso leh.
Fikraddu maaha inaad internet yeelato. Fikradda ayaa ah in la abuuro WLAN ballaaran oo dhammaan adeegyada loo baahan yahay ay isku shabakad yihiin. Tusaale ahaan Wikipedia. Moodle ama isku xirka VPN si loo jaangooyo oo loo dhigo koorsooyinka jaamacadaha. Fikraddu maaha inay ku xirxiraan iyaga si ay uga helaan Facebook. Fikradda ayaa ah inay ka faa'iideystaan.
Fikraddu maaha inay ku xirxiraan iyaga si ay uga helaan Facebook. Fikradda ayaa ah inay ka faa'iideystaan.
Aamiin! Waxa ugu fiican ee ku saabsan dadaalku waa kan
Waad ku heshay sax iyo qalad xD!.
In kasta oo farsamo ahaan ay tahay «LAN», waa wireless, waa WLAN.
In kasta oo ay u dhaxayn lahayd deriska, runtii waa wax aad u ballaadhan, maaha oo keliya xaafadda, laakiin waa magaalada. Tan macnaheedu waxa weeye inay leedahay anteenooyin aad uga awood badan kuwa "wifi" caadiga ah.
Marka laga hadlayo internetka laga shaqaaleysiiyay ISP, fikradda shabakadaha mesh waxay si sax ah u noqonayaan internetka magaalada, halkaas oo adeegyada la bixiyo aysan ka imaanayn dadka ku nool dhinaca kale ee adduunka (coffcoffEEUUcoffcoff!), Laakiin taa badalkeeda toos baa loogu martigeliyaa magaalada. , oo ku xiran shabakadda mesh. Maaddaama ku xirnaanta shabakaddan ay tahay mid bilaash ah (waa silig la'aan, beel, iyo, waxay kuxirantahay noodhadhka jira, oo leh daboolid ku filan), looma baahna in lacag la siiyo qof kasta oo ku xiraya shabakadda.
Markii aan internetka qandaraas kula galno ISP, waxaan bixinaynaa isku xirnaanta ay ahayd in ISP ay ku xirto fiilooyinka waaweyn iyo waxaas oo dhan. Halkan tani way iska cadahay, maxaa yeelay fikraddu waa in la sameeyo "internet yar oo heer maxalli ah", oo leh dhammaan faa'iidooyinka iyo kaydinta kharashka ah ee ay tani keenayso, gaar ahaan dadka aan bixin karin qiimaha, ama meelaha aan lahayn daboolid. Tusaale ahaan, shirkaddu waxay adeegsan kartaa shabakadda (iyadoo sameysa VPN) si ay isugu xirto laba xafiis oo isu jira hal ama laba kilomitir. Tani aad ayey uga jaban tahay bixinta xafiis gaar u ah isku xirka xafiisyada.
Waxaan rajeynayaa in waxaas oo dhan aad fikrad fiican ka haysatid arrinta, tixgelin ^ _ ^
Hubaal, waan helay. Aad ayey faa'iido u lahaan laheyd isku xirka adeegyada dowlada sida hanaanada qaar ee lagu sameeyo iyadoo la buuxiyo foomamka internetka. Kuwa aan heli karin internetka waa inay safaf dhaadheer ugu galaan xafiisyada habraac qaadanaya daqiiqado (tusaale ahaan, helitaanka shahaadada CUIL / CUIT).
Sikastaba, nasiib wacan mashruuca.
Oo sidee laygu xiriiri karaa, kani waa nooca mashruuca ee ay tahay in la taageero, waxay ii tahay waddo aan ku beddelo maskaxda, waxaan jeclaan lahaa inaan ka mid noqdo !!!
Dhamaadka boostada waxaan kaaga tagayaa macluumaadka xiriirka. Hagaag, ku biir Medellín Libre sidaas oo kale.
si aad u fiican, salaan ka timid Bucaramanga!
Dadaal aad u fiican. Waxaan rajeyneynaa in Peru nidaamkan loo sameyn doono si loogu faafiyo internetka hab cadaalad ku ah gobolada aan la gaari karin, sidoo kale taasi waxay tusaale u tahay in laga fogaado inaad miciinsato dad damiir laawayaal ah oo dhigta Access Point sudhan tiir iyo in bixiyaha uu ku khiyaaneeyo habka ugu naasaha badan.
Isbaanishka waxaan haynaa wax la yiraahdo guifi.net, oo waliba kacaan badan leh, oo ugu yar oo ah 10 yuuro bishii waxaan u maleynayaa, inaad haysatay internet ah 20/20
guifi.net waa shabakadda mesh ugu weyn adduunka. Taasi waa hadafka kuwa kale 😀
@ abdisalamisma4 dijo
Xeebta Atlantika waxaan sidoo kale si adag ula shaqeyneynaa Caribemesh, hadda dhismaha waxaa loo sameeyay in lagu rakibo noodhadh in Getemani oo ah xaafad caan ah oo ku taal bartamaha Cartagena waxaana la hadlaynaa dadka La Unimagdalena iyo dadka reer La Guajira si loo ballaariyo bulshada oo dhan gobolka caribbean. Halkan waa boggeena oo weli dhismihiisu socdo http://www.caribemesh.org waxaadna naga heli kartaa barta twitter-ka sida @CaribeMesh.
Jawaab @ pcu4dros
Software Bilaash ah oo ku yaal Peru
Sida loo dhexgeliyo ogeysiiska Pidgin ogeysiisyada KDE